Semalt: Nahoana ny plugins WordPress dia miseho avy amin'ny Directory Plugin?
Efa misy plugins eo amin'ny dimampolo eo ho eo ny WordPress plugin ao amin'ny directory plugin, saingy indray mipi-maso indray ny sasany amin'izy ireo, ary tsy azontsika ny antony mahatonga izany. Misy antony maromaro ny antony mahatonga izany, saingy tsy misy ny fampahalalam-baovao na oviana na oviana.
Ross Barber, manam-pahaizana malaza Semalt dia miteny fa raha nanjavona tampoka ny plugin anao ary te hahafantatra ny antony alohan'ny hanombohana ny fanadihadiana, tokony hanamarina ny tontolon'ny WordPress ianao amin'ny fanarahana ireo fahafaha-manao
1. Ny tranonkao dia ampiharina
Indraindray ny tranonkala WordPress na ny fitorahana blaogy dia iharan'ny herisetra raha tsy fahalalana. Ny vintana dia ny nangalatra ny angon-drakinao ary ny plugins dia tsy miasa araka ny tokony ho izy ao amin'ny WordPress. Avelao aho hilaza aminao fa WordPress dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ireo karazana fototra amin'ny plugins rehetra sy ny fanesorana ireo code izay nampidirina ao amin'ny metadata, saingy raha mbola mitohy ny olana, dia mila manontany avy hatrany amin'ny WordPress ianao na ny manam-pahaizana IT.
2. Jereo ny kaody fanontam-pirinty momba ny halatra azo atao
Ny antony iray mahatonga ny WordPress plugin tsy maneho anao dia hoe ianao na olon-kafa no nanova ny code Editor. Indraindray ireo hackers sy spammers dia manararaotra ireo antontan-taratasim-panafarana sy ny code editor ao amin'ny tranonkalanao WordPress ary ampidiro ao aminy ny code malaza. Ny vintana dia ny iray amin'ireo code ireo no nitarika ny plugin anao hanjavona tao amin'ny directory plugin, saingy tsy misy zavatra tokony hatahorana. Ilaina fotsiny ny mandeha any amin'ny sehatry ny fanontana ary jereo raha mahazatra ny zava-drehetra..Raha mahita kaody ahiahiana eto ianao dia tokony esorinao haingana araka izay azo atao.
3. Olana amin'ny file PHP
Tahaka ny fizarana ofisialin'ny mpampiasa, ny rakitra PHP dia mety ho fanovana nataon'ireo hackers na mpitantana iray hafa. Mila mijery fotsiny ny fanalahidin'ity rakitra ity ianao ary mamoaka izany, raha ilaina. Matetika ny solosaina toy izany dia nohavaozin'ny hackers noho ny antony ratsy.
4. Mitandrema amin'ny fitaovana fampidirana code
Tsy tokony hampiasa fitaovana fanodikodinam-peo maimaim-poana ao amin'ny tranokala WordPress ianao. Izany dia satria ny code toy izao dia afaka manova ny plugins rehetra na ny plugins rehetra ao amin'ny lahatahiry ary mety ho very aza ny fahafahanao miditra amin'ilay tranonkala. Ny hackers indraindray dia manafika ny fandikan-dalàm-panafahana ny fandikan-dalàna ary mametraka lozam-pifamoivoizana maro ao amin'ny tranokalanao amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo, noho izany dia manoro hevitra anao izahay mba hialana amin'ireo fitaovan'ny code sy hiantohana ny fiarovana ny tranokala.
5. Afaka manala ny plugin ny
Indraindray, WordPress dia mamafa na manala ny plugin iray ary ny antony tsy fantatra. Na izany aza, azonao atao ny manamarina ny safidinao momba ny fiarovana ary mifandraisa amin'ireo loholona mba hampitsaharana WordPress amin'ny fanesorana plugins maro amin'ny hoavy. Raha efa nampitandrina anao matetika ny WordPress momba ireo zavatra roa ireo ary tsy nahatsikaritra ianao, dia mety ho nesorina avy ao amin'ny lisitra automatique ny plugin .
6. Ampandreneso ny plugin mba hisorohana azy tsy ho esorina
Indraindray ireo plugins efa ela dia ampitaina amin'ny endrika automatique na nesorina tao amin'ny lahatahiry plugin WordPress. Mba hisorohana ity olana ity, tokony hanavao tsy tapaka ny plugins ianao ary hitazona ny fenitra arak'izy ireo araka izay azo atao Source .